Michel Platini Childhood Story Plus tsy misy fitantarana momba ny tantaram-piainana
Home vato nasondrotry Michel Platini Childhood Story Plus tsy misy fitantarana momba ny tantaram-piainana
Jolay 14, 2018
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Elite Football iray izay fantatra indrindra amin'ny anaram-bosotra hoe "Ny mpanjaka". Ny rakitsary momba ny tantaram-pitiavan'i Michel Platini momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tantaram-piainana tsy hita isa dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Ny tantaran-dry Micheal Platini dia singa mahaliana iray hafa izay mitarika anao amin'ny dingana iray amin'ny fitsanganany amin'ny tsy fahamendrehana amin'ny lazany ary koa ny fiafaran-javatra mampalahelo izay nandrosoany taona maro. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Michel François Platini dia teraka tamin'ny andro 21st of June 1955 tao Joeuf, Frantsa. Izy dia teraka ho an'ny rainy, Aldo Platini izay mpampianatra sy mpilalao baolina fandaka am-pirahalahiana tamin'ny fotoana nahaterahany. Amin'ny lafiny iray, ny renin'i Michel, Anna Platini dia mpilalao bararata tao amin'ny Bar des Sportifs izay midika hoe toeram-pialan-tsarimihetsika. Ny antokom-pianakaviana antonony ao amin'ny ray aman-dreniny dia manolotra fanombohana manetry tena an'i Michel.
Nihalehibe tao amin'ny fianakaviana zokiny indrindra i Michel - tahaka ny ankamaroan'ny ankizy tamin'ny androny - dia naka ny ankamaroan'ny fanatanjahan-tsain'ny rainy, baolina kitra ary navela hilalao baolina eny an-dalambe ho any am-pahasahiana.
Fotoana fohy taorian'izay dia nanjary nalaza teo anivon'ireo namany izy ary nametraka ny anaram-bony voalohany sy malaza "Peleatini"Ho fankasitrahana ny fiderana azy noho ny fahombiazany tamin'ny baolina kitra.
Mahatalanjona eo amin'ny fahaiza-manaon'ny fahazazany izay azony dia ny fahafahany mandray baolina kitra baolina kitra izay ny mpiray tanàna any an-tanindrazany dia heverina fa fandrahonana ho an'ny fiainana sy ny fananana.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Herisetra vokatry ny fo
Na dia izany aza, i Michel dia nanamafy ny amin'izay mety ho baolina kitra ho azy ary nanao ny tsara indrindra ho an'ny fanatanjahantena. Taorian'ny nahazoany traikefa nandritra ny taona maro teo amin'ny baolina an-dalambe, dia nanamboatra fiaramanidina ho an'ny fandraisana andraikitra matihanina ao amin'ny FC Metz i Michel saingy nolavin'ny klioba izay niheverana fa sahiran-tsaina loatra izy hilalao baolina kitra noho ny ahiahy malemy fo.
Tanora sy ambiramby, i Michel dia tsy olona iray izay namela fotoana iray hitifitra ny rantsan-tànany. Nifanohitra tamin'ny tsy fialany tamin'ny klioba izy ary nomena fahafahana hanaporofo ny faharetany tsy eo amin'ny sehatry ny milalao, fa amin'ny fiparitahan'ny rivotra ao amin'ny milina iray ataon'ny dokotera mpanolo-tsaina ataon'ny FC Metz.
Tsy vonona ny hanome làlana azy ireo i Michel dia nanome ny fitsapana mihoatra noho izay tsara indrindra vitany ary naharary azy roa minitra taty aoriana, fampandrosoana iray no noraisin'ny dokotera ho fanamafisana ny lazany ary ny fanamarinana ny fandavana azy.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Asa fanorenana
Downtrodden, nokorontanina nefa tsy nasiaka, i Michel dia nisafidy ny ampahany tamin'ny fiainany ary nanome baolina matihanina tamin'ny balafomanga iray izay azony antoka fa nekena fa tsy afaka mandà ny fandàvana hafa ny fony.
Iza amin'ireo klioba hafa no afaka manome toky kokoa noho ny AS Nancy izay niasa tamin'ny maha-mpikambana azy tao amin'ny fitantanana baolina kitra?.
Raha ny zava-mitranga any aoriana dia lasa ny tombotsoan'ny mpifanolobodirindrina amin'ny klioba sy ny rivodoza AS Nancy Lorraine izay nahatonga an'i Michel ho fampisehoana mahatalanjona izay nahitana azy ho mpilalao malaza na klioban'ny klioba.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mitsangàna mba haka izany
Tao amin'ny AS Nancy dia nanatontosa fahaizana mahavariana sy maingoka be dia be i Michel, ary koa ny fahaizana manatsara ny fahaiza-manao, mitarika ny tanjona 98 ao amin'ny lalao 181. Tamin'ny taona 21, Mitchel no nanao ny laharam-pireneny iraisam-pirenena ho an'i Frantsa izay nandefasana ekipa Nasionaly hafa manokana tseky avy amin'ny baolina maimaim-poana.
Tonga ny fanasana ny onja Fame rehefa i Michel fony izy mpilalao tao amin'ny Juventus (taorian'ilay fametahana nahomby tao Saint Etienne) dia nanao sazy sy nandresy ny tanjona nanohitra an'i Liverpool izay nahita ny toerany nanandratra ny fiadiana ny amboara Eropeana. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fifandraisana fiainana
Vao iray monja ny vehivavy iray tao amin'ny tantara romantin'i Michel Platini ary lasa vadiny Christelle Bigoni izy.
Mbola nilalao an'i AS Nancy i Michel rehefa nihaona tamin'i Christelle vadiny izy, mpianatra iray avy amin'ny siansa momba ny tontolo iainana. Izy koa dia nanatanjaka ny fitiavana ary tsy saro-kenatra velively ny hamantatra ny vadiny amin'ny andiany samihafa.
Nanambady an'i 1977 ireo mpivady ary mbola tsy nanambady hatramin'izao.
Ny firaisan'izy ireo dia nahazo zanaka roa, Laurent Platini sy Platini an-dranomasina.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Heysel Rivo-doza Stadium
Ny disadisa tamin'ny kianjan'i Heysel dia fifandonana teo amin'i Liverpool sy ny mpankafy an'i Juventus, izay nahita fa nipoitra tamin'ny rindrina izay nirodana taty aoriana. Ny zava-nitranga mahatsiravina dia nitranga tamin'ny 29th of May 1985, nitarika ny fahafatesan'ny olona 39 - ankamaroan'ny Italiana sy ny mpankafy Juventus - raha kely indrindra dia 600 hafa no naratra.
Ny fifandonana nitranga tamin'io androm-piainana io ary i Michel Platini izay namono sazy sy fanoherana ny lalao manohitra an'i Liverpool amin'ny fikarakarana ny kaontinanta Eoropeana dia nahatonga an'i Michel Platini ho heverina ho tsy misy dikany amin'ny fankalazana ny tanjany nandresy na dia efa maty aza ny andro niainany.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Poste Professional Football
Michel Platini misotro ronono avy amin'ny baolina matihanina rehefa antitra 32 tamin'ny volana 1987 izy. Volana maromaro aorian'ny fisotroan-drononony, dia naka asa ho mpanazatra izy ho mpitantana ny federasiona Nasionaly ao amin'ny 1988 ary nahita ny ekipany ho mendrika ho an'ny Championship Européenne 1992 ary koa ny rakitsoratry ny fandresena ny lalao valo rehetra.
Teo anelanelan'ny 1988 ka hatramin'ny 2006 Michel dia nanatevin-daharana ny fitaovan'ny UEFA sy ny FIFA, izay nanompo tao amin'ny komity samihafa mandra-pahatongany tao amin'ny 2006, nanohitra sy nandresy an'i Lennart Johansson noho ny toeran'ny filohan'ny UEFA.
Ny fahaleovan-tenan'i Platini dia naharitra nandritra ny 8 taona, 255 andro, faharetan'ny fifanandrinana goavana tamin'ny taona 16 nandritra ny lahimatoan'i Lennart Johansson. Ny mety ho nahatonga ny fanimbana ara-tsaina Frantsay ny fotoana maha-filohan'ny UEFA azy; faniriana na ilaina ?.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fampidirana am-bava
Naniry ny hanolo ny filoham-pirenena FIFA, Sepp Blatter izay nametra-pialana tao 2015 ny Platini, saingy ny Duo (Platini sy Blatter) dia voaheloka noho ny lazaina ho kolikoly, fitantanana tsy ara-dalàna, fifanoherana ny tombontsoa, ​​ny kaonty diso ary ny fiaraha-miasa amin'ny komity etika FIFA.
Ny fampandrosoana dia namarana ny hetahetan'ny filoham-pireneny an'i Platin (raha vantany vao navoaka ny baiko 8 avy amin'ny baolina izay naverina tamin'ny 6 taona taorian'izay), dia nanome baiko an'i Gianni Infantino izay nanohitra sy nandresy ny toerana sarobidy. Nitarika ihany koa ny fialany izy ho filohan'i UEFA taorian'ny nahavitany ny fandraràna azy nandritra ny enin-taona tamin'ny baolina kitra.
Michel Platini Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Facts hafa
Ny hetsika nataon'i Platini tany Juventus tamin'ny fahavaratry ny 1976 dia tsy nifototra tamin'ny fifanarahana fa ny vola natokana ho an'ny governemanta Frantsay tamin'izany fotoana izany.
Nahavita feon-javatra tsy fahita firy izy ho an'ny firenena roa amin'ny lalao iraisam-pirenena. (Frantsa sy Koety)
Izy dia nandresy nandritry ny telo taona i Ballon d'Or. Izany dia nitranga nandritra ny taona; 1983, 1984 ary 1985.
Izy Zinedine Zidane anaka.
Nandritra ny fotoanany tamin'ny maha mpitantana baolina kitra azy, dia tena nanohitra tanteraka ny famindrana ny mpilalao 18 izy, izay heveriny fa endrika tsy ara-dalàna amin'ny endrika fanondranana ankizy an-tsokosoko.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny takelaka ofisialy momba ny tantaram-pitiavan'i Michel Platini momba ny tantaram-piainana malaza. Ao amin'ny LifeBogger, miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Tantaran'ny tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy hatramin'ny taona lasa
Gianni Infantino tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra